2CsCl → Cl2 + 2Cs
koloriin cesium koloriin cesium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2CsCl → Cl2 + 2Cs
Waa maxay xaaladda falcelinta CsCl (caesium chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo Cs (cesium)?
Dhacdada ka dib CsCl (caesium chloride)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Cs (cesium), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CsCl (Cesium chloride), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2CsCl → Cl2 + 2Cs
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CsCl (caesium chloride)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CsCl (caesium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CsCl (caesium chloride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2 (caesium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Cs (cesium)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cs (caesium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cs (cesium) badeecad ahaan?
fosgene koloriin carbon monoxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta COCl2 → Cl2 + CO
Waa maxay xaaladda falcelinta COCl2 (phosgene)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo CO (carbon monoxide)?
Dhacdo ka dib COCl2 (phosgene)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Co (Kaarboon monoksaydh), oo soo muuqanaya dhammaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CoCl2 (phosgene), la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada COCl2 → Cl2 + CO
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta COCl2 (phosgene)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee COCl2 (phosgene)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh COCl2 (phosgene) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2 (phosgene)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO (phosgene)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO (carbon monoxide) badeecad ahaan?
2ScCl3 → 3Cl2 + 2Sc
Kloride Scandium; Scandium trichloride koloriin Sc; Scandium
(lng) (anốt) ( ↓ bisad)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2ScCl3 → 3Cl2 + 2Sc
Waa maxay xaaladda falcelinta ScCl3 (Scandium chloride; Scandium trichloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo Sc (Sc; Scandium)?
Dhacdada ka dib ScCl3 (Scandium chloride; Scandium trichloride)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Sc (Sc; Scandium), oo soo muuqda dhammaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Scl3 (Scandium chloride; Scandium trichloride), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2ScCl3 → 3Cl2 + 2Sc
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta ScCl3 (Scandium chloride; Scandium trichloride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee ScCl3 (Scandium chloride; Scandium trichloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh ScCl3 (Scandium chloride; Scandium trichloride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2 (Scandium chloride; Scandium trichloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Sc (Sc; Scandium)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Sc (Scandium chloride; Scandium trichloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Sc (Sc; Scandium) alaab ahaan?
ThCl4 → 2Cl2 + Th
Thorium (IV) chloride; Chloride Thorium; Thorium tetrachloride; Thorium (IV) tetrachloride; Chloride Thorium (ThCl.)4) koloriin Thorium-232; Th; Thorium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta ThCl4 → 2Cl2 + Th
Waa maxay xaalada falcelinta ThCl4 (Thorium(IV) chloride; Thorium chloride Thorium tetrachloride Thorium(IV) tetrachloride Thorium (ThCl)4))
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo Th (Thorium-232; Th; Thorium)?
Dhacdo ka dib ThCl4 (Thorium(IV) chloride; Thorium chloride Thorium tetrachloride Thorium(IV) tetrachloride Thorium4))
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Th (Thorium-232; Th; Thorium), oo ka muuqda dhammaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda ThCl4 (Thorium (IV) chloride; Thorium chloride; Thorium tetrachloride; Thorium (IV) tetrachloride) Thorium chloride (ThCl4)), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada ThCl4 → 2Cl2 + Th
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta ThCl4 (Thorium(IV) chloride; Thorium chloride; Thorium tetrachloride Thorium(IV) tetrachloride Thorium4))
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee ThCl4 (Thorium(IV) chloride; Thorium chloride Thorium tetrachloride Thorium(IV) tetrachloride Thorium4))? Waa maxay falcelinta kiimikada leh ThCl4 (Thorium(IV) chloride; Thorium chloride Thorium tetrachloride Thorium(IV) tetrachloride Thorium4)) si ka falcelin ah?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Cl2 (Thorium(IV) chloride; Thorium chloride Thorium tetrachloride Thorium(IV) tetrachloride Thorium4))? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Th (Thorium-232; Th; Thorium)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Th (Thorium(IV) chloride; Thorium chloride Thorium tetrachloride Thorium(IV) tetrachloride Thorium4))? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Th (Thorium-232; Th; Thorium) alaab ahaan?
2Cl3 → 3Cl2 + 2C
cerium(iii) chloride koloriin Ce; Cerium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2CeCl3 → 3Cl2 + 2C
Waa maxay xaaladda falcelinta CeCl3 (cerium(iii) chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo Ce (Ce; Cerium)?
Dhacdada ka dib CeCl3 (cerium(iii) chloride)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Ce (Ce; Cerium), oo soo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CeCl3 (cerium(iii) chloride), oo meesha ka baxaysa
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2CeCl3 → 3Cl2 + 2C
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CeCl3 (cerium(iii) chloride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CeCl3 (cerium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CeCl3 (cerium(iii) chloride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cl2 (cerium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Ce (Ce; Cerium)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Ce (cerium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikada ee leh Ce (Ce; Cerium) alaab ahaan?